Posted by Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 4, 2016 pa 8:35 AM
Kune vazhinji rakanga rachena zvigadzirwa ikoko anogona kukubatsira kurasa echitema kana yeyero mazino. Uchawana zviitwe rinoparadza, patireyi akazadzwa whitener kana rakanga rachena rinoparadza. Nzira idzi dziri zvose zvinotsiva zvikuru kudhura nyanzvi zviitwe.
Mastrawberry zvinogona kushandiswa senzira dzinongoitika nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino. Zvepanyama yeimwe yakawanikwa mastrawberry kuchaita kuzvichenesa zvikadaro meno pasina kushandisa makemikari. Unogona Mash ari mastrawberry kupinda namatidza kuti unogona kukwesha pamusoro mazino ako uye ipapo ngazviitike kugara kwemaminitsi anoverengeka kana akatema Strawberry nepakati, ipapo inotapukira izvozvo pana mazino enyu kwechinguvana.
ZANO! Fruits muri mukuru uye dzinongoitika nzira kuzvichenesa zvikadaro meno dzimwe nguva. Muenzaniso zvimwe zvibereko dzinoshanda zvikuru panguva rakanga rachena mazino enyu vaizova mastrawberry uye maranjisi.
Iva nechokwadi mazino ako akanyatsokopwa kucheneswa asati kushandisa kumba rakanga rachena mazino poda. Rakanga rachena mazino zvinogadzirwa achashanda zvakanaka kana ukashandisa pamusoro mazino akachena. Kana mazino enyu havasi kana iwe ukatanga kuzvichenesa zvikadaro akachena pane mukana wakanaka kuti Zvingaguma gogonera uye oneka.
Mazino rakanga rachena rinoparadza zviri zvikuru kuwanika uye zvikuru inokwanisika. Uchingoda vanofanira kuisa kanyika pamusoro mazino ako, ipapo siya ikoko kwenguva unotaurwa nguva nguva sezvo vanorichenesa uye whitens mazino ako. kamwe dzakakurumbira, rakanga rachena rinoparadza vakarasikirwa nyasha zhinji nekuda kwavo varombo nemigumisiro.
ZANO! Mazino rakanga rachena zvigadzirwa anogona mazino enyu kunzwisisa chigadzirwa yauri kushandisa. Hazvina kunorwadza kunyange zvazvo chete kwenguva pfupi.
Unofanira kungwarira chaizvo kana kudya kana kunwa pashure zviitwe kwemeno nzira aita. Meno ako achaita kuti yakasvibiswa nyore vazvinzwisisa echitema pashure pokunge whitened. Zvakakosha kudzivisa rima mavara zvokudya uye anonwa pashure achangobva whitened mazino ako. Coffee muenzaniso chinhu chichaita nyore nyura nokuda mazino ako uye zvinogona kukonzera discoloration.
Chinhu chainyanya kukosha kuti iwe unogona kuita kuti awane kunyemwerera zvinoshamisa chena ndiko kuenda wemazino nokuda dzose cleanings. Iva nechokwadi kuenda nokuda yakachena ose 6 mwedzi. Nguva dzose yeuka kuti akamisa yaizogadzwa chitsva apo nachiremba wemazino saka imi regai kukanganwa paya. Kumbira mazino hofisi wako kukuyeuchidza asati pamwe runhare.
ZANO! Kukwesha mazino ako pashure ose kudya iri nzira huru muvadzivirire vakasununguka kubva echitema. zvokudya zvakawanda uye zvinwiwa zvinogona kuti aizonyatsovachenesa mazino ako.
Kutakura chikwesheso diki kuti iwe kushandisa pashure kudya sugary zvokudya. zvihwitsi izvi kunamatira mazino ako, uye kukonzera staining kana kuwedzera chii ungava uchitova. Mushure kudya zvihwitsi, kukwesha mazino enyu kwenguva pfupi nguva yakawanda. Mushonga wemazino hakusi zvakakodzera; chete kusuka mazino ako uye ipapo sukurudza zvakanaka nemvura.
Soda yekubikisa, kana pamwe peroxide, unoumba unhu mushonga wemazino kuti zvinoderedza utachiona uye anobvisa echitema. Edza Kukwesha mazino ako kuitwa pakati 5-10 maminitsi. Gara ngwarira kuti hausi kwokugeza mazino kunyanyisa zvakaoma, sezvo musanganiswa zvechokwadi anogona kugumbura mazino ako.
ZANO! Imwe yenzira nechokwadi mazino ako arambe chena kuti akamisa dzose kugadzwa Pakushanyira wemazino kuchenesa navo. imwe nyanzvi kuchenesa chete anogona kugadzirisa makore tartar ikure-up uye discoloration.
Kana mazino enyu kutanga tingling kana kunzwa inonyatsoziva paaishandisa chigadzirwa kuti whitens mazino, regedza kushandiswa pakarepo. Unokwanisa kuita wanyanya pane chaunoziva mazino ako, saka zvakanaka panguva iyoyo kuti vawane nyanzvi rutsigiro. Bvunza chiremba wemazino kwenyu pamusoro zvaunogona kusarudza.
ZANO! Kugara flossing uye Kukwesha mazino ako ari pakati kubudirira zvikuru nzira iri rakanga rachena mazino enyu. Nokushandisa mitoo izvi, iwe kuchaderedza nebheji buildup, chikonzero chikuru kwemeno discoloration.
Kutevera zvose mirayiridzo pamusoro musha zviitwe zvigadzirwa ukashandisa. Izvi zvinogona kugumbura mazino ako uye kukuvara teeth.Use mazino ako rakanga rachena zvigadzirwa chaizvo uye chete sezvatinorayirwa pamusoro mugadziri.
Mushure rakagara mazino rakanga rachena nzira, zvakakosha kuti iwe kukwesha mazino enyu pashure ose kudya. Kana ukarega chikafu uvake pamusoro mazino enyu, zvinogona kukonzera kwemabhakitiriya kukura mumuromo mako. Mabhakitiriya anogona kunyevenutsa mazino ako, izvo zvinogona kuita kuti vave tichikurumidza kukuvadza uye kudzikira.
ZANO! Dzivisa midzanga, kofi uye simba tii. Izvi zvinogona kutendeuka mazino ako mashava.
Kofi nezvimwe staining mvura kuburikidza uswa ndiyo nzira inobudirira kuwana mazino akachena. The uswa anopa nguva kukonzera mazino staining. The mvura kuchaita yokunzvenga mazino ako uye anoenda akananga pasi muromo wako.
Isa Strawberry muto uri chikwesheso uye bhurasho sezvo Muzvarirwo kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. The asidhi kubva muto dzinopomhodza wako zino enamel, zvichiita kuti kuchenesa kure kwakawanda discoloration nemazino ako. Podràs kudzorera mamiriyoni emadhora kunyemwerera yako kure isingasviki miriyoni emadhora vachishandisa nzira iyi.
ZANO! Pashure rakanga rachena mazino ako, kushandisa Vaseline kukuyeuchidza kuramba achinyemwerera. Zvingasava vasina yakanaka munuhwi, asi zvakanaka panguva kusika munhu blockade kuti anopa mazino ako kudzivirira staining vaviri maawa.
Kukwesha mazino enyu nguva dzose kuti vave nechokwadi kuti uchida kuchengeta kunyemwerera huru. Food nezvimwe zvinhu anogona kuvaka pamusoro mazino ako uye aizonyatsovachenesa navo pashure dzimwe nguva. Haufaniri kuva neshungu pamusoro zino discoloration chero uine dzose wenguva dzose mazino-kwokugeza mazino yokungoitawo.
Dzivisa kushandisa mavara mouthwashes. mouthwashes izvi kuti freshen mweya yenyu, asi vachava zvimwe aizonyatsovachenesa mazino ako kwacho. Doro chinhu chinoita dzakawanda, uye kuti vanogona kukuvadza rurimi rwako uye mazino uye zvinogona nyura kupinda dzeropa.
ZANO! Unodzivirira mazino yako kwokugeza mazino navo. Unogona uyewo kuitora rimwe danho, uye kutanga kushandisa mushonga wemazino kuti whitens mazino ako.
Paro zvinogona kukonzera kunzwa uye vade kuita staining.
Taura chiremba wemazino yako pamusoro healthiest nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako usati watenga chinhu. chiremba wemazino Your vachaziva chii zvakanakisisa zvavanogona vari kunze uko, uye iye achaiswa anogona kukuudza pamusoro divi zvinokonzerwa chokuita nedzimwe enyika kuti mazino zviitwe.
ZANO! Itai tsika flossing mazino ako. Flossing zvinotiyamura mukubvisa nebheji, izvo Inoita kuti atindivare vanaamwene mazino ako.
Kana muromo wako inotanga chinombovanetsa, pakarepo kurega rakanga rachena. Kana mukawana aikanganiswa vachishandisa rakanga rachena zvinogadzirwa, unofanira pakarepo regedza kushandiswa akakutadzira chigadzirwa kusvikira unogona nyaya yacho kuna chiremba wemazino.
For mazino akachena, usanwa tii kana kofi. Zvinwiwa izvi discolor mbeu mazino. Kudai kunwa kofi, Ivai nechokwadi kuti imi sukurudza muromo wako panze pakarepo mushure iwe anoitwa. Izvi zvinogona kubatsira sipidhi chero Migumisiro Zvinwiwa izvi zvine pamusoro mazino ako.
ZANO! Edza kudya Citrus michero kana uchida mazino ako kutarisa akachena. Pamusoro pe, udzivise muto Citrus zvibereko.
Taura nezino rakanga rachena muitiro. Regai kuzvichenesa zvikadaro mazino ako pashure muchizadzwa zvakaongororwa in kana mazino basa.
Unofanira muchikuya yakaoma Bay mashizha uye Orange rinokwatuka ive upfu. Add mvura upfu iyi uye bhurasho pamwe muvhenganiswa ichi. Kuita izvi ruchatibatsira kudzivirira chingamu chirwere uye in.
ZANO! Shandisa walnuts omuti kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Tora duku zvishoma pamusoro nemakwati uye varikwizire naro mazino ako.
Shandisa rehydrogen peroxide kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Unogona kuita izvi nokungosaina Anonyudza ane washcloth kana donje zvinhu vakanyika kupinda mhinduro. Chokuzora nguva dzose nemadhaka jira pamusoro dzine mazino ako. The peroxide chinobatsira Vhenekai echitema uye wash jira achaita somunhu scrubber.
Vamwe mishonga kuchabatsira kuzvichenesa zvikadaro meno, akadai womuapuro cider vhiniga. Nzira iyi kunobatsira kubvisa mabhakitiriya uye echitema mumuromo mako, sezvo unomunatsa mazino ako kwacho. Kakaridza kamwe pazuva, kazhinji mangwanani, pamwe womuapuro cider vhiniga, nokuitevera achikwira Kukwesha mazino ako.
ZANO! Kukwesha mazino enyu nomunyu. Munyu mushonga kuti zvechisikigo uye vanokwanisa kubatsira kubvisa pakati echitema pamusoro mazino ako.
Chase aizonyatsovachenesa inokonzera zvinwiwa nemvura. Girazi remvura sukurudza kunodzivisa aizonyatsovachenesa kukonzera drink kubva mukumisa. Imwe pfungwa ndeyokuti kushandisa uswa apo kunwa rima-mavara zvinwiwa.
Kukwesha mazino enyu ane mabhanana svuura. Izvi ndizvo zviri nyore chaizvo uye chipa, saka unogona dzika ndokuadira yenyu zuva nezuva. Kamwe waita akasvuura ari mabhanana, kumhanya svuura pamusoro mazino ako chete usati kukwesha pavo. Shure kuita izvi, kukwesha mazino enyu sezvo imi raizodai. Izvi vachakupai pakarepo zviitwe zvabuda.
Shandisa nyoro divi ane orenji svuura kuti kubvisa echitema uye kuti mazino enyu. Uchigonawo kusanganisa Dried orenji svuura pamwe nemicheka zvakohwewa Bay mashizha kuti namatidza nokuda mazino ako. Iva nechokwadi kurigeza muromo wako kwazvo afterwords kubvisa zvose muchero shuga yacho.
Regai kuteerera upi mushonga wemazino kuti vanozviti ivo achakupai mazino akachena. Vanogona kukupa zvishomanana rakanga rachena kushanda, asi ziva kuti mamwe unyanzvi zvinodiwa zvimwe. Kana uchiri sarudza kushandisa rakanga rachena mushonga wemazino, nechokwadi kuwana munhu ane kubikira pasoda mairi.
Kumbira chiremba wemazino yako kukupa imwe Ngirozi zvinogona kushandiswa pamba kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kutarira akachena. Nzira iyi inogona kuita mazino vako noruvara anosvika masere!
Kana uri kuedza mazino akachena, kuenda wemazino kuti kwavari vakachenesa sezvo kazhinji muchikwanisa. Kugara mazino cleanings tiri mumwe inonyatsobudirira nzira dzaungashandisa zviitwe yako kwemeno poda. Unofanira kushanyira chiremba wemazino wenyu cleanings kwemwedzi dzinenge dzose nhanhatu.
Unofanira nechokwadi une chikwesheso kodzero zvakanaka kukwesha mazino enyu mhando. Wemagetsi chikwesheso kunonyanya zvakanaka chekubvisa nebheji uye echitema vaunganidza pamusoro mazino ako ose zuva. Izvi vachava mazino ako sezvingatarisirwa Cleaner uye akachena.
Unofanira kuchenesa uye kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kana kutevera zuva nezuva vane mushonga wemazino uye flossing. Sarudza zvinhu zvine kubikira pasoda sechinhu chokurapisa zviitwe wemafuta sezvo zviri zvikuru inobudirira chekubvisa echitema.
Unogona kuchengeta mazino ako akachena pachishandiswa uswa pashure chero rakanga rachena procedure.Drinks vaine kwevari ruvara pigments dzinogona chidodzi mazino ako. Uchishandisa mashanga kudzivirira mazino mberi kubva pakuva zvakananga kuonana staining makemikari.
Idya zvokudya zvinovaka vari crunchy. The abrasiveness pamusoro crunchy zvokudya kuchiwedzera rokuchenesa simba mazino ako paunenge dzinodzeya navo. Ichavaruma wose, regai cheka navo!
Muzviitire Strawberry namatidza nokuda Kukwesha mazino. Mastrawberry kare vairatidza kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Kusanganisa dzimwe namatidza pachako, uchada 1/4 mukombe mvura, soda yekubikisa (1/2 mukombe) mastrawberry uye nhatu kuti vave mashed.
Regai kuputa pazvimonera kana midzanga. Zvose izvi zvave rikaratidzwa kuti discolor mbeu mazino ako kuti rakabuda ruvara. Edza kurega kusvuta kuchengeta mazino enyu kubva wekushanduka yero. Kana uri kutamburira kuti kusvuta, bvunza chiremba wako kuti mazano kana mishonga kukubatsira pakuitika. Unofanira mijenya rutsigiro zvakanaka uye zano rakasimba.
Mazuvano, iwe zvechokwadi pembedzo muchishivirirana yero uchinyemwerera. Unogona kuwana chichiwedzera kunyemwerera nokushandisa imwe zhinji rakanga rachena mazino zvigadzirwa akagadzirirwa kumba kushandiswa. The zviitwe Kits unogona kushandisa pamba vari ndoda anodhura pane rakanga rachena kwemeno kurapa, ivo rinonyanya kukupai chete mugumisiro.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 5, 2016 pana 1:02 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: Fruits, Strawberry, mazino zviitwe, zviitwe zvinogadzirwa, zviitwe mazino